Barnaamij ku saabsan iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Galkacyo. – Radio Daljir
Barnaamij ku saabsan iska-horimaad hubaysan oo ka dhacay Galkacyo.
Diseembar 24, 2009 12:00 b 0
Galkacyo, Dec 24 – Suuqa weyn ee magaalada Galkacyo ayaa waxaa ka qarxay dagaal ka dhashay dilka mid ka mid ah ciidanka bilayska ee magaalada Galkacyo.
Maamulka Puntland ee ka taliya magaalada Galkacyo ayaa ugu baaqay kan Galmudug ee ka arimiya qaybo ka mid ah xaafada Wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo in ay joojiyaan colaada, wadahadalna lagu dhameeyo dhibka jira.
Xaaladda magaalada Galkacyo oo deggan & wadahallo lagu joojinayo xiisaadda colaadeed oo socda.
?Warbixin ku saabsan iska-horimaad khasaare gaystay oo ka dhacay Galkacyo.